आन्द्रा बाहिरै रहेको शिशुको जन्म | eAdarsha.com
दाङ, २५ फागुन। तुलसीपुरमा आन्द्रा बाहिरै रहेको एउटा नवजात शिशुको जन्म भएको छ।
राप्ती अञ्चल अस्पतालम सोमवार राति १२.३० बजे आन्द्राभुँडी बाहिरै रहेको बच्ची जन्मिएको अस्पतालले जनाएको छ। तुलसीपुर-१८, क्वाङ्गी निवासी दम्पति उर्मिला चौधरी र सोगतवीर चौधरीको पहिलो सन्तान ती नवजात शिशुको जन्मदा नै आन्द्राभुँडी बाहिरै रहेको अवस्थामा जन्म भएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ।
आन्द्राभुँडी बाहिरै रहेको अवस्थामा जन्मिएकी ती नवजात शिशुको जन्म भएलगतै उनलाई नजिकै रहेको तुलसी हस्पिटल प्रालिमा लगेर आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका बालरोग विशषज्ञ डा किशोर खत्रीले बच्चीको अगाडिको पेट नै निर्माण नभएकाले आन्द्राभुँडी बाहिरै रहेको अवस्थामा बच्चा जन्मिनु दुर्लभ घटना भएको बताए।
उनले दुर्इ हजार बच्चामध्य यस्तो प्रकृतिको बच्चा जन्मिने सम्भावना आउने बताए। डा. खत्रीले यस्तो ‘ग्यास्ट्रो काइसिस’का कारण हुने जानकारी दिए। सानै उमेरमा बिहे गरेका दम्पतिमा यस्तो समस्या देखिने उनको भनाइ थियो।
डा खत्रीले आन्द्राभुँडी बाहिरै निस्किएको अवस्थामा जन्मिएकी ती बच्चीको ब्यान्डेज गरेर ब्यागमा सुरक्षित राखी आइसियुमा राखेर उपचार गरिरहेको बताए। तर उनले यस्तो प्रकृतिको अप्रेशन गर्ने व्यवस्था जिल्लामा नरहेकोले बुटवल वा काठमाडौँमा बच्चीलाई तत्काल लैजानुपर्ने बताए। समयमै उपचार पाएमा बच्चीको ज्यान बचाउन कुनै समस्या नरहेको डा. खत्रीले तर ढिला गरेमा बच्चीको ज्यान खतरामा पर्नसक्ने खतरा रहेको बताए।
यसैबीच, डा खत्रीले ती बच्चीको आफ्नो अस्पतालमा रहँदासम्म निशुल्क उपचार गर्ने बताए। तुलसीपुर हस्पिटलका सञ्चालकसमेत रहनुभएका डा. खत्रीले बच्चीको उपचारमा सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले नगद पाँच हजार आर्थिक सहयोग पनि गरेका छन्।